Zoom iri kuvandudza email uye karenda services | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura nhau dzakabvarura Zoom iya Vhidhiyo Kutaurirana Inc (inonyatso kuzivikanwa se Zoom) inotsvaga kugadzira makwikwi kuGoogle neMicrosoft Corp. mumusika wekugadzira.
Chisarudzo kuseri kweZoom kuwedzera masevhisi avo online pamwe zvichibva nekuti kambani inoda kuvei mumakore mashoma anotevera. Kutanga, kambani inogona kunge inoda kugadzira yayo yega sevhisi, ichipa zvinopfuura kungofona kwevhidhiyo.
Nekuwedzera kuisa maBhaibheri ako epurogiramu anozivikanwa, unozokwanisa kupa masevhisi anobatsira kugona kwako vhidhiyo uye nekupa ruzivo rwakatsetseka, kunyanya kumabhizinesi.
Sekureva kwenzvimbo dzakataura neThe Information yemushumo wakaburitswa, Zoom irikugadzira yayo yega sevhisi sevhisi webhu yakavakirwa uye iwe unogona zvakare kukwanisa kuvhura iyo khalendari chishandiso zvakabatanidzwa.
Vadzidzisi havana kuburitsa ruzivo rwakawanda pamusoro pechipo chekarenda. Zvisinei hongu akagovana zvimwe nezvezvido zveZoom kutarisana neGmail uye Outlook.
Maererano nemishumo iyo kambani iri kutsvaga kuvhura yekutanga vhezheni yayo email sevhisi mukutanga kwa2021 nechinangwa chekupa "inotevera chizvarwa" chiitiko chevashandisi. Izvo hazvisi pachena chaizvo kuti chipiriso chaizosiyana sei neyakajairwa email masevhisi.
Zvisinei, kune mimwe mienzaniso yemasevhisi anoedza kuipa iyo nyowani kune yakajairwa email fomula. Venture-yakatsigirwa kutanga Spike, semuenzaniso, yakatsiva iyo inbox neWhatsApp-senge interface inoratidza maemail seye mameseji ekutaura.
Heano rumwe ruzivo kubva kumushumo, iyo yakadoma mazita asingazivikanwe padyo neZoom hurukuro dzemukati nezvenyaya iyi:
Chinangwa cha Yuan chekuvandudza email uye mabasa ekarenda chikamu chehurongwa hwekukwikwidza neMicrosoft neGoogle kune vatengi vemakambani makuru, vanhu vakadaro. Ipo Zoom yakabatanidza yayo vhidhiyo sevhisi neemail uye karenda zvinopihwa kubva kune vamwe vanopa, vakuru veZoom vatungamiriri vakurukura kuti kuve neakawanda muunganidzwa wezvikumbiro kunobatsira kambani kuvhura yakafara network yevanoshandisa bhizinesi. Kunangisa vatengi ivavo kunowedzerawo kukosha kwekuvandudza chirongwa chekarenda, seemaimeri uye makarenda anowanzo shandiswa tandem, akadaro mumwe wevanhu.
Iyo kambani yakatotsvaga kuwedzera kubatsira kwepuratifomu yayo nekutanga masisitimu ayo anotendera vashandisi kuwana zvirinyore zvigadzirwa zve software senge Asana, Dropbox, uye Coursera kubva mukati meZoom. Kusanganiswa uku chiratidzo chakajeka chekuti Zoom inoda kuwedzera hunhu hwayo kupfuura musangano wevhidhiyo, akadaro Raúl Castañón-Martinez, muongorori mukuru weongororo ku451 Research, chikamu cheS & P Global Market Intelligence.
Vanozivisa nezve Ruzivo Vakayambira kuti Zoom achiri kugona kusarudza kusiya chirongwa ichi. Asi kana kambani ikazosarudza kuisa maemail uye makendendari zvikamu, zvigadzirwa zvepamusika zvinogona kugadzira makwikwi mazhinji kune vanokwikwidza Microsoft neGoogle, ayo anoshanda maviri epasirose anozivikanwa mabasa eemail uyezve achipa maturusi ekarenda sechikamu chekugadzira kwako mapakeji.
Kuunza zvimwe zvigadzirwa kumusika kunogona kuisa Zoom munzvimbo iri nani kuchengetedza kukura kunoshamisa kwachakasangana nazvo kubva ipapo pamusoro pegore rapfuura. Kutengesa kwekambani kwakapetwa katatu mukota yekupedzisira, kuchisvika mamirioni mazana manomwe nemakumi manomwe nemanomwe emadhora, uye kwakapa nhungamiro yekuti mapurojekiti emari inosvika madhora 777 mabhiriyoni pamari 2.58.
Zoom yatotanga maitiro ekuwedzera iyo crankcase yayomhinduro yekugadzira matsva matsva emari. Muna Gumiguru, kambani yakatanga OnZoom, chikuva chekutambira zviitiko zvepamhepo izvo zviripo parizvino pasina muripo wekubhadhara vashandisi veZoom, asi izvo vatungamiriri vakaratidza zvinogona kuitwa mari mune ramangwana kuburikidza nemari inoshandiswa pakutengesa matikiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Zoom iri kuvandudza email uye kalendari masevhisi
Slacko64 Puppy 7.0 inosvika pamwe nekuvandudzwa, rutsigiro rweEFI uye nezvimwe